ပြပွဲများ - Dames & Knights - ဂုဏ်အသရေရတနာများ HIGH ရတနာအိပ်မက်
ဖြစ်ရပ်များ ပြပွဲနှင့်ပြပွဲများ အမြင့်ရတနာ
ပြပွဲ - Dames & Knights - ဂုဏ်အသရေရတနာ
ဇြန္လ 9, 2017
Vila Viçosa၏စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအမိန့် - Grand Cross ၏လက်နက်နှင့် Grand Cross တံဆိပ်။
ဒီလက်သည်းက ၉ ချက်ပါတဲ့ကြွေဖြူကြယ်တစ်လုံးကိုကိုယ်စားပြုပြီးဘေးဘက်မှာရွှေရောင်ရောင်ခြည်အုပ်စု ၉ ခုပါ ၀ င်ပါတယ်။ သူတို့အလှည့်မှာတော့ငါးပွင့်သေးတဲ့ကြွေဖြူကြယ်တစ်လုံးရှိတယ်။
အလယ်ဗဟိုတွင်ကြယ်ပွင့်သည်မာရိ၏ကန ဦး“ MA” နှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတ“ Padroeira do Reino” ဟူသောကမ္ပည်းတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုချာ့ချ်မှဆိုင်းငံ့လိုက်သည်။
Grand Cross တံဆိပ်: ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြွေ။9× 7,5 စင်တီမီတာ
Grand Cross ၏လက်မောင်း - ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြွေ၊ ၁၁,11,5 × ၆၅ စင်တီမီတာ။
Andrea Rosso စုဆောင်းခြင်း။
ပေါ်တူဂီ - နန်းစံ
အဆိုပါ Vicenza ၏ရတနာပြတိုက်ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောယာယီပြပွဲဖြစ်သည် "Dames နှင့် Knights ။ ဂုဏ်အသရေရတနာများ”. ၂၀၁၇ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်အထိဂုဏ်ပြုသည့်ရတနာများနှင့်ဆက်နွယ်နေသောရှေးရိုးရာဓလေ့ထုံးစံကိုဂုဏ်ပြုရန်ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်း - ယနေ့ခေတ်တွင်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးသည့်အစဉ်အလာများစွာနှင့်ကိုယ်စားပြုမှုများဖြစ်သည်။
ဤပြပွဲသည်အဓိကကဏ္ two နှစ်ခုဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး၎င်းသည်အရပ်ဘက်၊ စစ်ရေးနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကျင့်စာရိတ္တများနှင့်အရည်အချင်းများအတွက်ချီးမြှင့်ခံရသောဆုများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရန်ရည်ရွယ်သည် (သီလ et merito).
ပြတိုက်ဒါရိုက်တာ Alba Cappellieri ၏စကားများ
“ ခေတ်ပြိုင်မှုကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အနေဖြင့်အများကိန်းကွဲပြားမှုကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအလှမယ်နှင့်အလှဆင်ခြင်းများကိုအာရုံစူးစိုက်သော Alessandra Passamai မှ 'Dames and Knights' ကိုတင်ပြသည့်နိယာမသဘောတရားသည်သူတို့၏အလှအပနှင့် semotic ရှုထောင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော knightly order တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ခံအခြေအနေနှင့်သူတို့၏အလွန်နှောင်ကြိုးကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ ”
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စုပေါင်းအခမ်းအနားများတွင်ပေးအပ်ချီးမြှင့်သောဤဆုတံဆိပ်များ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်များနှင့်ကြယ်များသည်အဆက်အသွယ်များဖြစ်လာပြီးတိုင်းပြည်မှလည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်အားလည်းကောင်းကျေးဇူးတင်လေးမြတ်သည့်သင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့သည်။ တန်ရာတန်ဖိုး၊ တန်ဖိုးများကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီပြပွဲကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတယ် - တစ်ခုကအမျိုးသားဂုဏ်ပြုမှုအတွက်ရည်စူးပြီးတစ်ခုကအမျိုးသမီးဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုများဖြစ်သည်။
အထီးဂုဏ်ထူးကဏ္sectionတွင် Knighthood ၏အမှတ်အသား ၄၀ ပါဝင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အရေးအပါဆုံးနှင့်ရှားပါးသောစုဆောင်းမှုများမှလာသည်။ ထို့အပြင် Giovanni Giolitti, အီတလီဘုရင်မှ၎င်းနှင့်အီတလီမှဤဂုဏ်ထူးများကိုရရှိခဲ့သည့်အလွန်အရေးကြီးသောအီတလီနိုင်ငံသားစုဆောင်းမှုမှရရှိသောနောက်ထပ်အပိုင်း ၁၀ ခုပါရှိသည်။ အခြားဥရောပနှင့်နိုင်ငံတကာပြည်နယ်များကိုနိုင်ငံတော်၏အကြီးအကဲအဖြစ်လည်းကောင်း၊
White Eagle ၏အမိန့် - Grand Cross တံဆိပ်နှင့်တပ်မှူး၏လက်နက်။
အဆိုပါကျောက်ပြားကိုတော်ဝင်သရဖူနှင့်အလယ်ဗဟိုတွင်ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏အထိမ်းအမှတ်အားဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်သော bicephalous ရွှေဖြူရှိသည့်ကြယ်တစ်လုံးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အမိန့်ကို ၁၈၈၃ တွင်ဆားဘီးယားဘုရင်မီလန် ၁ မှတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ရွှေ, ငွေ, ကြွေ။
9,6 ×9စင်တီမီတာနှင့် 10 × 3,6 cm
Giovanna Giolitti စုဆောင်းခြင်း။
ဤသည် Savoy အိမ်၏အမြင့်ဆုံးဂုဏ်အသရေသည်, ကော်လာ Savoyard ထုံးမှ alternating, စည်ကြေးဝါဒြပ်စင်၏ရေးစပ်လျက်ရှိသည်။
ကော်လာငယ်လေးကိုပြန်မပေးရဘဲနိုက်၏မိသားစုအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်“ ဘုရင်၏ဝမ်းကွဲ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးသူ့ကိုအကျွမ်းတဝင်အသုံးအနှုန်းများဖြင့်စကားပြောခွင့်ရခဲ့သည်။
6,5 × 4,5 စင်တီမီတာ (ဆွဲကြိုး) နှင့် 67 စင်တီမီတာ (လည်ဆွဲ) ။
အီတလီ - နန်းစံ
ဤအမိန့်၏မူလအစသည်perကရာဇ်ကွန်စတင်တိုင်း ၁ မှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ရှေးအကျဆုံးအစဉ်အလာနှင့်ရှေးအကျဆုံးအစဉ်အလာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
9 × 6,5 စင်တီမီတာ (ဆွဲကြိုး) နှင့် 60 စင်တီမီတာ (လည်ဆွဲ) ။
နှစ် ဦး Sicilies ၏နိုငျငံတျော။
Saint Alexander Nevskij - Grand Cross တံဆိပ်။
အဆိုပါတံဆိပ်သည်စိန်ပါသောရှစ်ပွင့်ကြယ်ပွင့်နှင့်၎င်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်“ အလုပ်နှင့်တိုင်းပြည်အတွက်” စိန်တံဆိပ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်အီတလီသို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်ကရုရှားNichကရာဇ်က Nicholas II ၏ Racconigi ၏ Castle တွင် Giovanni Giolitti ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြွေနှင့်စိန်များ။
9 ×9စင်တီမီတာ
Giovanna Giolitti စုဆောင်းခြင်း
ရုရှား - အင်ပါယာ
The Ladies honors section တွင်အပိုင်း ၁၀ ပိုင်းပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှအပါဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်မှာ Order Supremus Militaris Templi Hierosolymitani OSMTH ဖြစ်သည်။
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani OSMTH
အဆိုပါကော်လာအီတလီ OSMTH ၏အချုပ်အခြာအာဏာ၏အမိန့်တစ်ခု dame ကပိုင်ဆိုင်သည်
8,5 × 3,5 စင်တီမီတာ (ဆွဲကြိုး) နှင့် 52 စင်တီမီတာ (လည်ဆွဲ) ။
ပြပွဲ 'Dame နှင့် Knights ။ ဂုဏ်ပြုရတနာ ခရီးသွား ins ည့်သည်များအားတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏တန်ဖိုးများနှင့်အဓိပ္ပါယ်များအားအချိန်နှင့်တပြေးညီလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားစေသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
XIth ရာစုတွင်စတင်ခဲ့ပြီး Knights ကိုသီးသန့်ထားရှိပြီး ၁၆၆၂ မှသာ Dames သို့ကျယ်ပြန့်စွာရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ကွဲပြားခြားနားသောနယ်ပယ်များ၌သီလနှင့်အားသာချက်များကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည့်ထိုအခိုက်အတန့်များကိုသမိုင်းကြောင်းအစစ်ဖြစ်သည်။
'Dames နှင့် Knights ။ ဂုဏ်ပြုရတနာAlessandra Passamai မှပြတိုက်လုပ်ထားသောအလွန်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောရတနာတစ်ခုဖြစ်သည့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကို၎င်း၏လက်ရှိဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအားနှင့်၎င်း၏တန်ဖိုးထားမှုအရ - ယခုခေတ်တွင်၎င်းကိုပုံဖော်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုအတိတ်၏အရေးပါမှုကိုပြသသည်။ , ကျင်းပသောရတနာ။ CC
ပြပွဲ: Dames နှင့် Knights ။ ရတနာရတနာများ / မေလ ၂၄ ရက် - စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် ၂၀၁၇ / ဗစ်ချီဇ်ရှိရတနာပြတိုက် / Piazza dei Signori, 36100 Vicenza - Italia / info@museodelgioiello.it / Tel ။ +39.0444.320799
Tags:လက်မှုပညာများ • လက်မှုပညာ • ပြပွဲများ
မှတ်ချက်0ခုပြပွဲ - Dames & Knights - ဂုဏ်အသရေရတနာ"